Amagqabantshintshi ocacileyo: Indlela yokuHamba kweChican Man
I-Nails ye-Outline yeyona Ndlela ye-Manicure Sifumana Kanye I-Salon Reons
Nasi isizathu sokuba uCynthia Morgan abeTrend + 5 Yeengoma zakhe zeHit
Figumbi izikhonkwane ze-neon ukuba iinzipho zamafu kwaye ngoku iikhonkwane ezichazayo, ochwepheshe bethu bezipikili bahlala befumana ngakumbi kunye nokudala ngakumbi ngamanani ethu. Ubugcisa bezipikili obonakalayo yenye yeendlela zezipikili ebesizibona zininzi kwezi nyanga zidlulileyo kwaye siyalungiselela ukuba yenye yeendlela eziphambili zezipikili zika-2020.
Obu buciko bezipikili buhle, bulula kwaye bungadibani kwaye bunokunxitywa kwizikhonkwane ezinde kunye nezimfutshane. Uyilo lufezekiswa ngokulandela umbala owahlukileyo wokwenza isipikili kunye nemiphetho yangaphandle yezipikili esele zenziwe. Ngokwenkcazo, ifuna iiplanga ezimbini ezahlukeneyo; umbala osisiseko kunye nomnye umthunzi osetyenziselwe ulwandlalo.
Unokuhamba ngesibindi okanye uhambe ngokufihlakeleyo kwizikhonkwane zakho. Ke ukuba uluhlobo oluhlobo lwamantombazana amantombazana okanye usana olithandayo uyilo olupheleleyo lwezikhonkwane, kukho uyilo lwezipikili langaphandle.
Ukuba ujonge ukwenza iplagi yokujonga ekhaya, yonke into oyifunayo yimibala emibini yokuzikhethela kunye neminwe eqinileyo okanye isixhobo esilingayo kwaye usendleleni yokutsala umdla kwizikhonkwane zakho.
Siprinte i-11 yeembono ezibalaseleyo zezipikili ukukhuthaza…
Olu luphuculo lohlobo lwe-2.0 eposweyo izolo. That ⁣ ⁣ ⁣ Ngoku kuba ubabona bobabini, yeyiphi indoda eningathanda ukuba niyinyakaze 😏 (sebenzisa iposti yangaphambili ukuthelekisa u-1.0 no-2.0!)
Iposi elibiwe I-AMY LE • I-NAIL ARTist (@ amyle.nails) kwi Ngo-Apr 29, 2020 kwi-11: 40am PDT
Kwimigca ye-DIY, iVlogger Ukubethelwa ngu Mone unesifundo esineenkcukacha zokukukhokela.
Jonga indlela yokwenza i-manicure yesikhombiso apha ...
Ifoto yetyala: I-Instagram | NjengokuThunyelwe Chaza izimvo zezipikili
Ukuhlaziywa. Yapapashwa kuqala nge-7 kaMatshi ka-2020.
I-85nails ibhonbhu_imilambo nguyen kaylatakacsbe bec umquba iinzipho Nailsbyalma_ I-Nailsbyimanib Beka ubugcisa bezipikili izikhonkwane ezibaluliweyo bonisa ubugcisa bezipikili bonisa ngezipikili manicure pronails_snow I-Theonophipper
Ulonwabo Udo Ngamana 23, 2020
UTiwa Savage, uDavido kunye noMnu Eazi Uxolo I-Cover yeBillboard Magazine
Ukuvuselelwa kwe-Nail Super Cute Nail Yentombazana ethandayo uPink
I-DIY: Eyona ndlela ilula yokuSusa iinzipho ze-Acrylic Ekhaya